२० वटा कम्पनीको आईपीओ आउँदै, हेर्नुस् कुनको कति ? - Arthasansar
बुधबार, ०२ असार २०७८, १९ : ०२ मा प्रकाशित
नेपाली सेयर बजारमा पछिल्लाे समय नयाँ लगानीकर्ताहरू थपिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेकाे छ । धेरै जसाे लगानीकर्ताहरू आईपीओकाे माध्यमबाट बजारमा भित्रिने गरेका छन् । आजकाल आईपीओप्रति लगानीकर्ताकाे आकर्षण बढ्दाे छ । हरेक कम्पनीकाे आईपीओ निष्कासन हुँदा लगानीकर्ताहरू झुम्मिने गरेका छन् । जुन कुरा हरेकपल्ट पर्ने मागभन्दा धेरै आवेदनकाे संख्याले पनि पुष्टि गर्दछ ।
आईपीओ कै कुरा गर्नुपर्दा हाल विभिन्न १८ वटा कम्पनी नियामक निकाय नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड (सेबाेन) मा आईपीओ निष्कासन गर्न बाेर्डकाे स्वीकृतीका लागि पर्खेर पाइपलाइनमा बसेका छन् । एउटा कम्पनीकाे आईपीओ काेराेनाका कारण बीचमै स्थगित भएकाे छ । अनि एउटा कम्पनीले हालै मात्र सेबाेनबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृती प्राप्त गरेकाे छ । यसरी हेर्दा २० वटा कम्पनीकाे आईपीओ निष्कासन हुँदैछ ।
१. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड